15/05/2022 - Celebrity Corner
တော်လှန်ရေးတွင် အခုချိန်ထိ ပြည်သူတွေနဲ့အတူ ပူးပေါင်း ပါဝင်နေဆဲဖြစ်ကြောင်း ဗီဒီယိုဖိုင်နှင့်တကွ သက်သေပြလိုက်တဲ့ ဒေါင်း
Celebrity Corner | 15/05/2022
တော်လှန်ရေးတွင် အခုချိန်ထိ ပြည်သူတွေနဲ့အတူ ပူးပေါင်း ပါဝင်နေဆဲဖြစ်ကြောင်း ဗီဒီယိုဖိုင်နှင့်တကွ သက်သေပြလိုက်တဲ့ ဒေါင်း ယခုနွေဦးတော်လှန်ရေးမှာ နေရာအသီးသီးကနေ ပြည်သူတွေ ပါဝင် တော်လှန်နေကြတာပါ။ အဲ့ထဲမှာ နိုင်ငံကျော်မင်းသားတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ဒေါင်းလည်းပါဝင်တော်လှန်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ သူကတော့ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အားပေးမှု ပရိသတ်အများဆုံး ရရှိထားတဲ့သူတစ်ယောက်ပါ။ အာဏာစသိမ်းချိန် ကတည်းက တော်လှန်ရေးမှာ ပါဝင်ခဲ့ရင်း ထွက်ပြေး ပုန်းရှောင်နေခဲ့ရတာပါ။ ခုမှာတော့သူဟာ ထိုင်းနိုင်ငံမှာနေရင်း အနုပညာတွေ
အသက်ကြီးသွားလို့ ပရိသတ်နဲ့ဝေးကွာနေတဲ့ မင်းသား ထွန်းလွင်အောင် ခေါ် တစ်ချိန်က ဆားပုလင်းနှင်းမောင်
အသက်ကြီးသွားလို့ ပရိသတ်နဲ့ဝေးကွာနေတဲ့ မင်းသား ထွန်းလွင်အောင် ခေါ် တစ်ချိန်က ဆားပုလင်းနှင်းမောင် ဗွီဒီယိုခေတ်တခေတ်ထခဲ့တဲ့အချိန်က နယ်ပရိသတ်တွေ နဲ့ မြို့ပရိသတ်တွေပါ ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ မင်းသား ထွန်းလွင်အောင် ကိုတော့ ပရိသတ်တိုင်း မှတ်မိကြအုန်းမယ်ထင်ပါတယ်။ တစ်ချိန်က ဆားပုလင်းနှင်းမောင် ဆိုတဲ့ စုံထောက် ဗွီဒီယိုဇာတ်ကားတွေဟာ အရမ်းကို နာမည်ကြီး လူကြိုက်များခဲ့ပါတယ်။ မင်းသား ထွန်းလွင်အောင် ဟာ
မျက်ရည်ကျစရာ ကုသိုလ်ကြီးတစ်ခုကို လုပ်ခဲ့တဲ့ မေပန်းချီ…
မျက်ရည်ကျစရာ ကုသိုလ်ကြီးတစ်ခုကို လုပ်ခဲ့တဲ့ မေပန်းချီ… မေပန်းချီဆိုတဲ့ ချစ်စရာကောင်တဲ့ မင်းသမီးလေးကို အားလုံးပဲသိကြလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။ သိပ်ကို ချစ်ဖို့ကောင်းတဲ့ မျက်နှာလေးနဲ့ ခပ်လှလှ ခန္ဓာကိုယ်လေးကြောင့် အရင်က လူသိများခဲ့ပေမယ့်လည်း အခုနောက်ပိုင်းမှာ အပြုံးချိုချိုလေးနဲ့ Live Sale လေးတွေရောင်းခဲ့တာကြောင့်လူသိများခဲ့သူဆိုရင်လည်းမမှားပါဘူးနော်… ကျက်သရေရှိတဲ့ အလှနဲ့ လုံးကြီးပေါက်လှတဲ့သူမဟာ တစ်ခြားမိန်းကလေးတွေလိုတော့ မပိန်သွယ်ပေမယ့်လည်း ခပ်မိုက်မိုက် Body ကြောင့်လူကြိုက်ပိုလို့များလာခဲ့ပါတယ်.
သူ့ရင်ထဲကစေတနာတွေကို ထုတ်ဖော်ပြောပြခဲ့ပြီး လာရောက်စောင့်ဆိုင်းနေကြတဲ့ ပရိတ်သတ်တွေကို လက်အုပ်လေးချီကာ နှုတ်ဆက်ခဲ့တဲ့ ပိုင်တံခွန်
သူ့ရင်ထဲကစေတနာတွေကို ထုတ်ဖော်ပြောပြခဲ့ပြီး လာရောက်စောင့်ဆိုင်းနေကြတဲ့ ပရိတ်သတ်တွေကို လက်အုပ်လေးချီကာ နှုတ်ဆက်ခဲ့တဲ့ ပိုင်တံခွန် သရုပ်ဆောင် ပိုင်တံခွန်ကတော့ ရုပ်ရည်ချောမောရုံသာမကပဲ စိတ်ထားလေးလည်းနူးညံ့တာကြောင့် ပရိသတ်တွေရဲ့ ချစ်ခင်မှုကို အပြည့်အဝရရှိထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ပိုင်တံခွန်ကလည်း သူ့ကိုချစ်ခင်စွာ အားပေးကြတဲ့ ပရိသတ်တစ်ဦးတစ်ယောက်ချင်းစီတိုင်းကို တန်ဖိုးထားတာကြောင့် သူ့ရဲ့ဂုဏ်သတင်းဟာ ပြည်တွင်းပရိသတ်တွေ သာမက ပြည်ပနိုင်ငံကပရိသတ်တွေကပါ ပြောစမှတ်တွင်နေရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီကနေ့မှာလည်း ပိုင်တံခွန်က သူကိုးကွယ်တဲ့ သစ်တံခါးဆရာတော်ကြီးဆီ
လှောင်ချိုင့်ထဲက တေးသီငှက် (သို့မဟုတ်) ဂျန်ဇီခေတ်ရဲ့ အဆိုတော် ပိုပို….
လှောင်ချိုင့်ထဲက တေးသီငှက် (သို့မဟုတ်) ဂျန်ဇီခေတ်ရဲ့ အဆိုတော် ပိုပို…. မြန်မာနိုင်ငံက အမျိုးသမီး အဆိုတော်တွေထဲမှာ ခံစားချက်အား ကောင်းကောင်းနဲ့ သီချင်းတွေကို ကိုယ်တိုင်ရေး၊ ကိုယ်ပိုင်ဟန်နဲ့ သီဆိုတတ်သူက အဆိုတော် ပိုပိုပါ။ စကားပြောရင် ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ပြောတတ်ပြီး ရယ်လိုက်ရင်လည်း ဘွင်းဘွင်းရှင်းရှင်းနဲ့ အပြုံးချိုချို ရယ်တတ်တဲ့ ပိုပိုက စစ်အာဏာသိမ်းမှုကို ဆန့်ကျင်မှုကြောင့် အင်းစိန်ထောင်ထဲ